Voakasik’izany any Ranontsara Sud, Beravina, Ambovombe ary Andriamena. Efa miantomboka ny fanorenana ireo toerana hametrahana ny Zandary any amin’ireo faritra mena ireo, izay hiasan’ny Zandary miisa 100, ka manamboninahitra ny 25 amin’ireo, ary Zandary vao avy nivoaka ny Sekolin’ny Zandarimariam-pirenena ny 75. Hisahana sy hitety ireo faritra rehetra manodidina ireo toerana hitobiany izy ireo, hamerina ny fandriampahalemana amin’ny laoniny. Hahazo fiara vaventy iray sy fiara tsy mataho-dàlana roa isaky ny toby, ary moto folo avy izy ireo. Hisy ny toeram-ponenan’izy ireo izay hisy rano sy jiro ary hahafahany miaina tsara.
Nosamborin’ny Polisy avy ao amin’ny Kaomisarian’ny 67Ha-Antananarivo, efa natolotra ny fitsaràna ary notanana am-ponja eny Antanimora ilay mpanendaka mpamily fiara, izay mody mamo hita tamin’ny tambazotra serasera. Lehilahy iray hafa izay mpanendaka mody mamo toa azy ihany koa, no efa voasambotra teny amin’ny « Aigle Noir » Ambodin’Isotry, ary efa notanana am-ponja eny Antanimora taorian’ny nanolorana azy teny amin’ny Fitsarana. Lehilahy iray mpanendaka miaraka amin’ny antsy lava lela eny Vatobe 67Ha ihany koa no voasambotry ny Polisin’ny CSP7.
jeudi, 19 septembre 2019 10:27
Sambava tampon-tanana: Nitera-doza ny fanampenana ny lalam-pirenena RN5A
Fiara kely iray no potika tanteraka raha nidona tamin'ireo vato be apetraka mandritra ny alina eny amin'ny lalana nasiana fanamboarana eto antampon-tananan'i Sambava. Tsy lavitra ny biraon'ny Faritra SAVA no nitrangan'ny loza ny alin’ny alatsinainy 16 septambra 2019. Tsy nisy aina nafoy fa ny fiara no nitondra faisana. Samy nilaza ho tsy tompon'antoka avokoa ny mpitondra manoloana ny loza, tsy misy signalisation na filazana mialoha, fa ny torohevitra dia mila atao mazava tsara ny jiro mandritra ny alina, ary hajaina ny hafainganam-pandeha. (Jereo Sary Tohiny)
mercredi, 18 septembre 2019 20:33
Tetezan’i Mangoky: 64,28 tapitrisa dolara ny famatsiam-bola, hovitaina anatin’ny 54 volana ny asa
Kendrena ho vita any amin’ny volana jolay 2024 ny asa fanamboarana ny tetezan’i Mangoky amin’ny lalam-pirenena faha-9, eo amin’ny PK 199+700. Tafiditra amin’ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena faha-9 ny fanamboarana an’ity tetezana ity, amin’izay tsy mitsaka amin’ny baka intsony rehefa eo Bevoay. 64,28 tapitrisa dolara (241 miliara Ariary) ny vola hanatanterahana ny asa, izay famatsiam-bola avy amin’ny Tahiry Saodiana, BADEA, Tahiry Kowesianina, ny OFID (OPEC Fund for International Development) ary ny Fanjakana Malagasy.
mercredi, 18 septembre 2019 12:07
Nampafantarina omaly talata 17 septambra ireo 15 mirahavavy ho solontenan'i Madagasikara amin'ny Miss Tourisme. Izany moa dia hifidianana ny ambasadaoron'ny nosy eo amin'ny lafin'ny fizahantany sy ny fiarovana ny tontolo iainana, koa rehefa lany ny iray amin'izy ireo dia manao an'ilay antsoina hoe "promotion" an'ireo toerana izay mbola tsy fantatra eto Madagasikara. Marihina moa fa tamin'ny pejy facebook no nandefasana ny fifantenana. Ity tanjona iray ity ihany koa dia hanampy ny fanjakana amin'ny fampiroboroboana ny fizahantany eto Madagasikara, izay eo ambany fiahian'ny ministeran'ny fizahantany.
Ny alakamisy 12 septambra 2019 teo ireto dahalo raindahiny roalahy ireto no voasambotry ny Zandary avy ao amin’ny Poste Avancé Analavory, Distrika Miarinarivo. Nangalatra omby efatra tao amin’ny Fokontany Ambatomenaloha, Kaominina Analavory izy ireo ny alin’ny 11 septambra 2019. Saika hamidy aty Antananarivo ireto omby vositra ireto. Nataon’ny Zandary, niaraka tamin’ny Fokonolona ny fanarahan-dia ireo olon-dratsy. Noraisim-potsiny eo amin’ny kizon’Antanetimboahangy ireo dahalo, tsy afaka nampiasa ny antsy lava sy lefona teny ampelan-tanan’izy ireo. Natolotra ny Fampanoavana tao Miarinarivo androany ireto dahalo ireto.
Namono tena sa nisy namono ? Vatana efa tsy misy aina, mifatotra ny tendany sady mikirozaroza ao ambany tetezana no hitan’ny olona androany maraina teo amin’ny Pont Mangarivotra. Tombanana manodidina ny 50 taona eo ilay lehilahy.
Nahitam-bokatra ny folo andro naharetan’ny hetsika « Ady Jamala » nataon’ny Zandarimaria tao anatin'ny Distrikan'Ambanja sy Ambilobe. Rongony 150 000 fototra, milanja 1680 kg, tamina velaran-tany 20ha tao Andohan'ifasy, sy rongony maina saika hamidy mitontaly 1300 kg, tratra teny amin'ireo kizo Mevadoany-Mahadera, Kaominina Marotolana sy Ambohitrandriana-Betaindambo, Kaominina Marovato, no nopotehin’ny Zandary nandritra ny hetsika. Nodorana ny andron'ny 13 septambra 2019, teo anatrehan'ny Lehiben'ny Distrika sy ny Fitsaràna ary ny Fonkotany ireo loza mitatao rehefa vita ny taratasy momba izany. (Jereo Sary Tohiny)
23 taona no nampisy ny art malagasy Digue FIMPIAMA. Mangataka ny fitondram-panjakana ireo mpivarotra eny amin'ny route digue mba hanomezana ny toerana ho azy ireo ho titré-borné noho ny lalana izay efa nafindra toerana. Izany indrindra no nanatontosana ny dinika niarahana tamin'ireo mpivarotra sy mpanao asa tanana malagasy tamin'ny fiadiadiana ny Repoblika, izay natao teny amin'ny Live hôtel Andavamamba.
Fifidianana: Kaominina miisa 21 tsy nisy kandida Ben’ny tanàna
Nanao tatitra vonjimaika ny Vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana (CENI) ny atoandro teo. Fantatra tamin’izany fa Kaominina miisa 21 amin’ireo 1695 no tsy nisy mpirotsaka ho fidiana Ben’ny tanàna ; Kaominina miisa 77 amin’ireo 1695 kosa no tsy nisy mpirotsaka ho fidiana ho mpanolontsain’ny tanàna. Miisa 5483 ireo antotan-taratasy firotsahan-kofidiana Ben’ny tanàna, voaray teny amin’ny OVEC miisa 119, mitsinjara amin’ny Kaominina miisa 1674, naharaisana filatsahan-kofidiana, manerana ny Nosy. Miisa 4020 kosa ireo antotan-taratasy firotsahan-kofidiana ho Mpanolontsain’ny tanàna mitsinjara amin’ny Kaominina miisa 1618, naharaisana filatsahan-kofidiana, manerana ny Nosy.